Xog sidee loo qabtay saraakishii alshabab ee galmudug lagu qabtay? | HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Xog sidee loo qabtay saraakishii alshabab ee galmudug lagu qabtay?
Xog sidee loo qabtay saraakishii alshabab ee galmudug lagu qabtay?
Ciidamada Booliiska Dhuusamareeb ayaa qabtay gaadiid ay la socdeen kala dagey rag dhalinyaro ah oo kayimid Hargaysa kuwaa oo kusii jeeday Deegaanka Luuq-jeelow oo hiiraan ka tirsan kana mid ah meelaha Alshabaab ay joogaan.
Previous articleDegdeg Rag ka tirsana Alshabab oo lagu qabtay Magaalada Dhuusamareb
Next articleRaysulwasaare Rooble oo magacaagabay Gudi Farsamo oo ka Shaqeeya arimaha Doorashooyinka halkaan ka aqriso Magayada Gudiga